सतीप्रथाजस्तै जातिप्रथा कहिले अन्त्य होला ? - Dalit Online - Dalit Online
के चाइनिज, जापानिज, युरोपियन, अमेरिकनहरूले कानुन थाहा पाएर छुवाछूत नगरेका हुन् र ? उनीहरूको चेतनामा मान्छे जन्मजात शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, अपवित्र हुन्छ भन्ने नै छैन । कानुनले त मान्छेको मनमा डर सिर्जना गरिदिने मात्र हो, छुवाछूतको अपराध नै नगर्ने चेत त कानुनले बनाउने होइन । यो त फेरि जात थाहा पाएपछि मात्र हुने अपराध हो।
प्रकाशित | ११ असार २०७५, सोमबार १६:४३